I-OPPO ikhohlisile kwiimvavanyo zentsebenzo | I-Androidsis
I-OPPO iyakopela kwiimvavanyo zayo zokusebenza kwe-smartphone
UEder Ferreño | | Iiselfowuni, Izaziso
Ukuvavanywa kokusebenza kwemizobo ye3Mark kunceda ukumisela ukusebenza kwefowuni kwiimeko ezahlukeneyo, ezinje ngokusetyenziswa kwemidlalo yevidiyo okanye ukufuna usetyenziso. Ezi mvavanyo zenziwa ngenxa ye-UL, inkampani ejongene nale software. Enkosi ngayo, uninzi lweemveliso kunye neemodeli ziyavavanywa. Nangona ayinguye wonke umntu odlala ngokulingana, njengoko kunjalo nge-OPPO.
Kuba kufunyenwe oko I-OPPO ikhohlisile ngeli xesha lovavanyo apho ezinye iifowuni zavavanywa khona. Le yinto u-UL uqobo, umyili wezi mvavanyo, sele eyazisile. Ngenxa yoko, iifowuni zomenzi waseTshayina zisusiwe kwiziko ledatha.
Ngokucacileyo iifowuni ze-OPPO yonyuse kakhulu ukusebenza okomzuzwana kuvavanywa uvavanyo lwentsebenzo. Ngale ndlela, amanqaku ovavanyo angcono afunyenwe. Oku kuvumela iifowuni zorhwebo ukuba zivele kwizikhundla eziphezulu. Phakathi kweemodeli ezichaphazelekayo iya kuba kukufumana i-X okanye i-A7.
Ukuze ukwazi ukumisela ngokuqinisekileyo ukuba kunjalo, i-UL isebenzise inguqulelo elungisiweyo yesoftware yayo, ukuze iifowuni zebrendi zingafumani ukuba luvavanyo lwentsebenzo. Kwimeko enjalo, amanqaku kunye nentsebenzo efunyenweyo ibisezantsi kwabo bafunyanwa xa besebenzisa isoftware yoqobo, eyamkelwa yifowuni.
Imigangatho ye-UL ivumela ifowuni ukuba inyuse ngamandla okanye inciphise ukusebenza kwiimeko ezithile, njengokusebenzisa imidlalo okanye ukufuna usetyenziso. Kodwa ukuyenza kuphela xa usebenzisa iimvavanyo zentsebenzo akuvumelekanga. Kwaye yile nto yenziwe ngu-OPPO.
I-OPPO ayilulo uphawu lokuqala olubanjiweyo kolu hlobo lwezenzo. U-Huawei wabanjwa kwiinyanga ezimbalwa ezidlulileyo kwisenzo esifanayo, kunye neziphumo ezingabonisi nyani.
Umendo opheleleyo kwinqaku: I-Androidsis » Izixhobo ze-Android » Iiselfowuni » I-OPPO iyakopela kwiimvavanyo zayo zokusebenza kwe-smartphone
Umsolwa, ukubulala kunye nokukhusela abantu obathandayo kwiDolophu yaseSalem, yenye yeemidlalo zonyaka
Fumana uninzi lweWaze ngezi ngcebiso